Waa maxay siyaabaha aad dib ugu heli karto boggeyga?
Backlinks waxay u adeegtaa sidii ay ugu noolaan laheyd goobta website-yada iyo doorka kaalinta koowaad ee cayaaraynta tabinta raadinta. Taasina waa sababta khubarada SEO ku maalgelinayaan qaabab kale oo ah isku xirnaanta isku xirka haddii ay raacayaan tilmaamaha Google ama aan. Siyaabaha faafaya ee jiilka xiriiriya waxaa ka mid ah boostada martida, wadaaga bulshada, boostada blogka, ololaha wacyigelinta iyo xiriiriyaal lacag leh.
Farsamooyinka dhismaha ee xiriiriyahan ayaa laga yaabaa inay wax ka taraan dadaalkaaga SEO ama ay ku baabi'iyaan dhamaantood. Inta badan milkiilayaasha bogagga waxay ku qaadaan ereyada "waxtarka SEO" iyaga oo ah ilaha maaraynta shabakadaha ee kobcinta. Si kastaba ha ahaatee, xaqiiqda murugada leh ee ku saabsan waa xitaa haddii aad dhisto bog cusub oo tayo sare leh, ma jirto wax dammaanad ah oo aad ku heli doonto boosaska sare.
In maqaalkan, waxaad ka heli doontaa qaar ka mid ah sababaha xiriirka dibadda aan toos ugu saameyn karin booska darajadaada bogga natiijooyinka raadinta.
Maxaad dib u heleysaa boggaaga ma aha mid had iyo goor natiijada ka soo baxda?
Haddii aad hesho xiriirro dibadda ah ee aad ku sameysey siyaabooyin spamaad ah oo khiyaano leh, wax badan ma qaban doonto. Dib-u-tayada badan ee tayada hooseeya ee ka socda bogagga sadexaad ee internetka kuma siin doono inaad ku riixdo SERP. Ma aha oo kaliya boggaaga ayaa waligeed kuxiran natiijooyinka TOP ee Google, laakiin sidoo kale waxaad halis u tahay in lagu ganaaxo.
Maalmaheenna, websaydhadu waxay ka warqabaan khatarta ka iman karta dhabarka spammy sida xariirka dibadda ee beeraha isku xirta, faallooyinka bogga spammy, boosteejada xayeysiiska iyo maqaallo la duubo. Si kastaba ha ahaatee, qaar ka mid ah milkiilayaasha bogagga, gaar ahaan kuwa ku cusub kuwan cusub, waxay ku dhici karaan siyaabo sahlan si ay u helaan cabitaano badan oo ku saabsan ilaha webka muddo gaaban gudaheeda. Waxaan si adag uga talinaynaa in laga fogaado farsamooyinka dhismaha ee khiyaanada leh sida Google hadda u noqoto mid dareen leh oo si dhakhso ah u ogaanaya dhammaan xeer ilaaliyeyaasha oo ciqaabi kara. Marna ma ogaan kartid sida Google uu u tarjumi doono tan ama gadaal. Mararka qaarkood raadinta khadka tooska ah ayaa iska indho-tiraya isku xirnaanta bogagga spammy iyo ha ka tirin gaadiidka iyaga.
Si aad natiijo muuqata uga hesho ololahaaga dhismahaaga, waxaad u baahan tahay inaad hubiso in aad dhiseyso isku-xiryo ka yimid goobo kuwaas oo ah - uqurxin, ku habboon suuqa, suuqa kalsoonida, goobaha la isku halleyn karo iyo kuwa la aqoonsan yahay.
Caqiido kale oo caanka ah ee ku jirta qaybtan ayaa ah in gadaal laga helo mid ka mid ah ilaha websaydhka TOP online sida ganacsadaha, Forbes ama New York Times si dhakhso ah u riixi kartaa bogga SERP. Had iyo jeer ma shaqeeyaan isla sidan oo kale. Xiriirkani wuxuu kaa caawin karaa boggaaga in uu darajo sareeyo oo kuu keeno badan oo baabuurta la isku rogay ama aan wax saameyn ah ku yeelan maadooyinkaaga oo dhan.
Xaalad isku mid ah ayaa lagu arki karaa faalooyinka blogka. Xaaladaha qaarkood, xiriiriyayaashu waxay keenaan qiimo badan qiimaha goobtaada, laakiin mararka qaarkood waxay ku calaamadeysan yihiin sida sifooyinka spammy ee ganacsigaaga. Dhamaan faallooyinka blogadaada ayaa laga yaabaa inay soo saaraan natiijooyin kala duwan boggaaga Source .